« NY MARINA ? Nanala baraka an’andriamatoa Rakotomanana Honoré, filohan’ny antenimieran-doholona ny gazety Free News (Pejy faha-2 tamin’ny 20 mai 2017). | NewsMada
Ho tohin’ny lahantsoratra nivoaka tamin’ny lohateny lehiben’ny Free News ny sabotsy faha 20 may 2017, mitondra ny lohateny « Manangana trano mijoalajoala miisa rihana 5 Rakotomanana Honoré», izay nolavin’ny olona voakasika, ny kabinetran’ny Filohan’ny antenimeran-doholona dia nanantona ny Holafitry ny mpanao gazety eto Madagasikara mba « handray ny handraikitra araky ny lalàna misy ». Nisy ny fanelanelanana nataon’ny filohan’ny Holafitra, Gérard Rakotonirina, sy ny lefiny eto Antananarivo, Didi Ratsimbazafy.
Ho fankatoavana ny hajan’n y Holafira izay nanao izao fanelanelanana izao, ary ho fiarovana sy tsy hamoahana ny loharanom-baovao, ny fanoran’ny Free News dia manaiky ny hamoaka manontolo ny « Valin-kafatra » nalefan’ny Kabinetran’Andriamatoa Honoré Rakotomanana araky ny fepetra takin’ny lalàna ary « maneho fialan-tsiny » amin’ito farana, izay tompon’andraikitra, etsy andanin’izany, ny fampiharana izay tapaka nandritry ny fanelanelanana nataon’ny Holafitry ny Mpanao gazety.
Ny Fanoratan’ny Free News dia maneho fisaorana, arak’izany ny Holafitry ny mpanao gazety, indrindra fa ny Filohany sy ny lefiny eto Antananarivo, noho ny finiavany.
Ny Talehan’ny Famoahana,
Lahatsoratra iray tamin’ny fiteny malasy sy frantsay, niaraka tamin’ny sary maromaro trano iray misy rihana dimy no navoakan’ny gazety Free News tamin’ny andron’ny sabotsy 20 may 2017. Toy izao ny lohateny tamin’izany « mpitondra fanjakana nanakarena tampoka : manangana trano mijoalajoala mis rihana 5 Rakotomanana Honoré », izay nivoaka teo amin’ny lohateny lehibe sy tany amin’ny pejy faha-2 sy faha-7. Ireo fanadihadiana natao tamin’izany dia tsy matihanina na fanajana ny etika sy ny deontolojia. Raha tena matihanina ilay mpanao gazety nanao ny fanadihadiana, mialohan’ny nanamafisany ny zavatra nolazainy, tokony nanatona ny orinasa manao ny tao-trano (izay an’I M. Danil Ismaël et Ferris Engineering) amin’ny olona tompon’ny trano izay nifanaraka tamin’izy ireo. Andriamatoa Rakotomanana Honoré sy loholona maromaro ihany koa dia efa nanao fanambaram-panana teny anivon’ny HCC tamin’ny taona 2016, niaraka tamin’ny kabinetrany, nanomboka tamin’ny fotoana nandraisany ny asany. Teo anelanin’io fotoana nanaovana ny fanambaram-panana io hatramin’izao, tsy manana tany any Ambatomirahavavy na Arivonimamo na any amin’ny faritr’Itasy izany izy.
Azonay ambara tsy ampihambahamana araka izany fa tsy an’Andriamatoa Rakotomanana Honoré izany io trano vao amboarina io. Tsy misy afaka hilazan’ny mpanao gazety ihany koa fa “…matetika mandalo eny amin’ny biraony ny tompon’andraikitry fanamboarana… eny Anosy maka vola”. Azo raisina ho misy faharatsian-tsaina raha mikasika ny fanadihadiana sy ny loharanom-baovao. Angatahinay araka izany ny tompon’io trano io mba hanao fanambarana amin’ny mpanao gazety sy ny tompon’andraikitry ny fanamboarana ilay trano manoloana izao fiampangana amin’ny asan’izy ireo izao.
Nandritra izay enimpolo taona nanaovana asa ho an’ny fanjakana sy ny fiainam-bahoaka izay, tsy manana fahafahana hanangona harena be tahaka izao Andriamatoa Rakotomanana Honoré. Izay manam-potoana dia afaka mamangy azy ao an-tranony, izay azy manokana misy rihana iray.
Amin’ny maha-filohan’ny antenimieran-doholona azy, izay mikendry ny fahamarinan-toerana ara-politika sy ny fifandanjam-pahefana, tsy maintsy miady izy ho an’ny tombontsoan’ny Malagasy rehetra (mpitondra, fiaraha-monim-pirenena, ONG sns…) amin’ny alalan’ny asa mazava. Efa niasa ho an’ny tombon-tsoam-pirenena izy ary manohy izany asa izany. Ny ho avy no hanambara aminareo fa diso ianareo amin’ny filazana fa manana tetika ny ho filoha izy.
Andriamatoa Rakotomanana Honoré, olon-tsotra no sady filohana andrim-panjakana, dia miangavy ireo mpanao gazety mba hiasa amin’ny fomba matihanina, manaja ny etika sy ny deontolojia, mba ho fanadihadiana marim-pototra no avoaka, mba ho fiarahana misalahy amin’ny fanabeazana ny vahoaka, amin’ny fanjana ny zo fototra amin’ny fahafahana ahazo vaovao (marim-pototra no sady tsara).
Ny famoahana vaovao tsy mitombona tahaka izao dia fanalam-baraka, izay mikitika ny voninahitra sy ny maha izy azy ny olom-pirenena sady filohan’andrim-panjakana. Iangavianay ihany koa ianareo mba handray fepetra amin’ny “loharanom-baovaonareo”. Andriamatoa minisitry ny serasera sy filohan’ny holafitry ny mpanao gazety avy eo handray ny fepetra mifanaraka amin’izany.
Manameloka ny fanalam-baraka ataon’ny gazety mpiseho isan’andro Free News, izay mahavoatohintohina ny voninahitra sy fahatokisana an’Andriamatoa Rakotomanana Honoré.
Tompon’andraikitra amin’izay lahatsoratra sy sary avoakany ny Free News.
Ny kabinetran’Andriamatoa Rakotomanana Honoré